Xinhua Myanmar - ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၌ လေတပ်ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျမှုကြောင့် ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၃ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ
ဖိလစ်ပိုင်လေတပ် PAF မှ ကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Boracayကျွန်းရှိ ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင် လုံခြုံရေးစွမ်းရည်သရုပ်ပြနေမှုအားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Asia
ယင်းတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ် MD520MG သည် ပြုပြင်ဆဲဖြစ်ပြီး ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၉း၃၀နာရီဝန်းကျင်တွင် ပျက်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး Maynard Mariano ကဆိုသည်။PAF 15th Strike Wing မှ လေယာဉ်သည် Cebu ပြည်နယ်၊ Mactan ကျွန်းလေတပ်အခြေစိုက်စခန်းအနီး မှ ပျံသန်းခဲ့သည်ဟု Mariano ကဆိုသည်။
မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းအရင်းအား စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ် PAF သည်၎င်းပိုင် MG520 ရဟတ်ယာဉ်များပျံသန်းခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း Mariano က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“PAF က ပိုင်ဆိုင်သည့် ရဟတ်များအားမပျံသန်းခင် ပုံမှန်နှင့် အသုံးမလိုသော နေရာများအား စစ်ဆေး၍ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတွေကို တင်းကျပ်စွာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ပြည်သူကို အာမခံခဲ့ကြောင်း’’ Mariano ကဆိုသည်။ယခုနှစ်တွင် ဒုတိယမြောက် PAF ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ Bukidnon ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော UH-1 Hueyလေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွင် စစ်သား ၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua
1 dead,3injured in air force helicopter crash in central Philippines
MANILA, April 27 (Xinhua) -- One pilot was killed and three crew members were injured asaPhilippine Air Force (PAF) helicopter crashed into the waters off Getafe town in central Philippine Bohol province on Tuesday morning, the military said.
Lt. Col. Maynard Mariano said the MD520MG attack helicopter was onamaintenance flight when it went down at around 9:30 a.m. local time.
Mariano said the aircraft from the PAF 15th Strike Wing took off from an air force base on nearby Mactan Island in Cebu province.
An investigation is underway to determine the cause of the accident, said Mariano, adding that the PAF decided to ground its MG520 fleet while the investigation is ongoing.
"(The PAF) assures the public that all of its air assets are undergoing strict, regular, and redundant maintenance inspections before and after flight missions," Mariano said.
This is the second PAF helicopter crash this year. Seven soldiers died inaUH-1 "Huey" aircraft crash in Bukidnon province in the southern Philippines on Jan. 16. Enditem
Previous Article ထိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် နှာခေါင်းစည်းမတပ်ဆင်သဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၉၀ ခန့် ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရ
Next Article အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ လေကြောင်းခရီးစဉ်များအား ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ဆိုင်းငံ့